Manao vy very ny ainy amin’ny asa fanaovan-gazety any amin’ny fanjakana anjakazakan’ny mpivaro-drongony mahery · Global Voices teny Malagasy
Manao ahoana izany manangom-baovao ao Honduras
Voadika ny 20 Febroary 2020 8:32 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Français, Nederlands, bahasa Indonesia, English
Miaramila sy polisy nifanatrika tamin'ny mpanao fihetsiketsehana nanohitra ny fanonganam-panjakana tany Honduras tamin'ny taona 2009. 11 Aogositra 2009. Saripika: Francesco Michele / Flickr
Mpanao gazety miisa 38 no maty tany Honduras nanomboka hatramin'ny taona 2010 araka ny tatitra nataon'ny UNESCO momba ny isan'ny mpanao gazety maty. Mbola tsy voavaha ny 70 isan-jato mahery tamin'ireo raharahara ireo.
Nahatonga an'i Honduras ho toerana mampidi-doza indrindra any Amerika ho an'ny mpanao gazety manao ny asany ireo tarehimarika ireo.
Nanamarika ny Reporters Sans Frontières fa ireo mpanao gazety izay maneho ny heviny malalaka na mitsikera ny governemanta” no matetika lasibatry ny fandrahonana ho faty na ny herisetra na voatery nandositra any ivelany. Matetika ihany koa izy ireo no iharan'ny fihoara-pahefana amin'ny dingana ara-pitsarana ary fahita matetika ny fanagadrana an-tranomaizina noho ny fanalam-baraka sy arahan'ny fandrarana azy ireo tsy hanao ny asany amin'ny maha-mpanao gazety azy ireo aorian'ny famotsorana azy ireo. ”
Tamin'ny fitantaran'olona manokana nataon'ny gazety Salvadoreana El Faro, nanazava ny fahasarotana amin'ny fanaovana tatitra ao amin'ny fireneny i Jennifer Ávila, talen'ny tranokalam-baovao nomerika Honduran Contra Corriente:
Midika fihazakazahana midona amin'ny rindrina ny fanoratan-gazety mahaleotena eto Honduras. Naorin'ny andrim-panjakana tantanan'ny mafia io rindrina io izay nampangina sy nampihorohoro ny vondrom-piarahamonina rehetra. Nomen'ny fampitam-baovao anarana hoe fanjakana mpivaro-drongony ny firenena mba hanatsorana zava-misy sarotra.
Na izany aza, mino i Ávila fa ny “tahotra sy ny tsy fahatokisan'ny vahoaka” ny tena fandrahonana lehibe indrindra amin'ny asa fanaovan-gazety Honduran. Heverina ho mpivaro-tena amin'ny governemanta na mpikatroka ara-politika ny mpanao gazety, ary milaza izy fa manaraka io fironana io ny fampitam-baovao Honduran sasany. Tsy manana sehatra firy noho izany ny mpanao gazety mahaleo tena mba hahazoana ny fahatokisan'ny vahoaka sy fahitana ny fahamarinana:
Matetika no lazaina fa “mpamadika” na “mpitati-baovao ho an'ny vahoaka” ireo mpanao gazety mitatitra ny fihetsiketsehana an-dalambe. Etsy ankilany, hita fa lasibatry ny fihetsiketsehana ihany koa izy ireo, raha etsy andaniny kosa dia jerena ho mpanao herisetra izy ireo. Ny fiheverana malaza fa natao hanafihana ny hafa fa tsy ny natao hampahafantarana ny marina ny asa fanaovan-gazety no manazava betsaka momba ny rafi-pahefana ao Honduras. Na mampiseho ny vokatry ny hetsika iray na manova io hetsika io ho olana ny asa fanaovan-gazety. Izany no mahatonga ny tontolo ho henjana kokoa ho an'ny asa fanaovan-gazety ao Honduras.
Milaza ihany koa i Ávila fa tokony hihoatra lavitra amin'ny fitantarana ny antsipiriany ny lafiny maha-olona ny tantara mampihoron-koditra momba ireo mpifindra monina izay naverina nody tany amin'ny toerana toa ny any an-tanindrazany any El Progreso any Avaratr'i Honduras. Tokony handalina bebe kokoa ny anjara andraikitry ny andrim-panjakana ao amin'ny fitondrana ny fitantarana, izay mety hahatonga ny fahamailoana bebe kokoa amin'ny manampahefana, hoy izy:
Notantaraiko ny tantaran'i Pilar, mpikambana ao amin'ny COFAMIPRO, komity mandrafitra ireo reny izay mikarakara isa-taona mankany Meksika hitady ny zanak'izy ireo lahy na ny zanany vavy izay nanjavona rehefa nifindra monina tany avaratra. Nandany taona maro nikarohana ny zanany vavy i Pilar. (…) Mila mahafantarana ny reny ao Honduras fa mety ho hitany voarasarasa indray andro ny zanany. Mila mahafantatra ny mpanao gazety ao Honduras fa tsy maningana ireo tantara ireo. Marary ny firenena. Midika ny fitantarana izany tantara izany fa ilaina ihany koa ny milaza ny antony mahatonga izany kanefa eo indrindra no manomboka ny olana bebe kokoa.
Tsidiho azafady ny El Faro raha hamaky ny lahatsoratra feno.